25 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Hindida ah ee Dibedda wax ku baranaya
Waa kuwan 25 deeqo waxbarasho oo la yaab leh oo loogu talagalay ardayda Hindida ah inay wax ku bartaan dibadda. Qaarkood waxaa si buuxda loo maalgeliyaa labadaba barnaamijyada jaamacadeed iyo kuwa jaamacadeedba halka qaarna qayb ahaan la maalgeliyo.
Waxaan ku liis gaarnay faahfaahintooda si aan kaaga caawino inaad doorato midka (yaabaha) aad aadi lahayd.
Maqaalkani wuxuu leeyahay dhammaan macluumaadka, sida ugufiican ee jidka loo maro, ee loogu talagalay ardayda Hindida ah ee doonaya inay wax ku bartaan dibadda iyada oo loo marayo sanduuqa deeqaha waxbarasho iyo sidoo kale sida loo dalbado deeqda waxbarasho.
Waxaan ku taageeri jirnay ardayda caalamiga sanadihii la soo dhaafay bilaash si loo xaqiijiyo gelitaanka iyo deeqaha waxbarasho ee dibadda lagu barto.
Waxaan dhowaan diyaarinay maqaal ku saabsan diyaar deeqaha waxbarasho ee dowladda ee dibadda waana u furan yahay arday walba oo ka kala yimaada daafaha dunida.
Waxaan ku taageernay barashada qadka tooska dhowr qodob oo soo bandhigaya fursadaha waxbarasho ee internetka ee ardayda caalamiga ah. Tilmaamayaashayada ugu caansan ee soo bandhigaan barnaamijyada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada ee la yimaada shahaadooyinka wh kan kale ayaa kashifaya koorsooyinka onlaynka ah ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee adduunka oo idil leh shahaadooyin daabacan.
Sidoo kale waa inaad ogaataa inay jiraan tiro ka mid ah barnaamijyada shahaadada degdegga ah ee khadka tooska ah waad ka qayb qaadan kartaa si aad u hesho shahaadada shahaadada waqti ka yar.
Halkan, diiraddeenna markan waa inaan ka caawinno ardayda Hindida ah inay codsadaan oo ay ku guuleystaan ​​deeqo waxbarasho oo dibedda ah oo ay wax ku bartaan waxaanan soo ururinnay tiro ka mid ah deeqaha waxbarasho si ay u caawiyaan
1 Dukumiintiyada Loo Baahan Yahay Si Aad Ugu Dalbato Deeqda Ardayda Hindida Ah Inay Wax Ku Bartaan Dibadda
2 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Hindida ah ee Dibedda wax ku baranaya
2.1 Inlaks Shivdasani Deeqaha Aasaasiga ah
2.2 Jaamacadda Adelaide Ashok Khurana Deeqda Ardayda Hindida ah
2.3 Deeqda Hogaamiyaasha Caalamiga ee Hindiya
2.4 UCD Deeqaha Caalamiga ah ee Ardayda Hindida ah ee ku nool Ireland
2.5 Deeqda Tulip Orange
2.6 Campus France Charpak deeq waxbarasho
2.7 Charles Wallace India Trust Deeqaha
2.8 British Council GREAT Deeqaha Ardayda Hindida
2.9 Oxford iyo Cambridge Society of India (OCSI) Deeqaha Waxbarashada
2.10 Jaamacadda Lincoln India Scholarship
2.11 Jaamacadda Oxford Felix Deeqda Ardayda Hindida
2.12 Deeqaha Caalamiga ah ee UWE
2.13 Jaamacadda Southampton Lacagta Deeqaha Caalamiga ah
2.14 University of Sheffield Scholarship
2.15 Sussex Indian deeq waxbarasho
2.16 Stanford Reliance Dhirubhai Fellowships ee Ardayda Hindida ah
3 Talo soo jeedin
Inta badan dadka doonaya inay noqdaan akadeemiyad weyn kuma guuleysan karaan riyadan sababo laxiriira “Fudud Dhaqaale”, taas oo ay ugu wacan tahay deeqaha waxbarasho ee ay maalgeliyaan dadka hodanka ah qaarkood, hay'adaha samafalka, dowladda, iyo qaar ka mid ah jaamacadaha gaarka ah ee aad aadi karto lacag la’aan.
Sida arday Hindi ah oo doonaya inuu wax ku barto dibedda deeqda waxbarasho, waa inaad ogaataa inay jiraan dukumiintiyo loo baahan yahay si loo bilaabo dalabkaaga deeqda waxbarasho, waxaan ku qeexi doonaa hoos.
Dukumiintiyada Loo Baahan Yahay Si Aad Ugu Dalbato Deeqda Ardayda Hindida Ah Inay Wax Ku Bartaan Dibadda
Waa inaad qaadataa imtixaannada gelitaanka oo ah TOEFL ama IELTS iyo GRE / GMAT oo aad haysato warbixinnada dhibcaha imtixaanka aad haysatid.
Fiisaha ardaygu waa lagama maarmaan maadaama ay tahay Aqoonsiga kuu oggolaanaya joogitaankaaga waddankaas muddadaas daraasadda.
Qoraalka Ujeedada (SOP)
Tixraac ama warqad talo bixin ah
Dukumiintiga khibrada shaqada - tan waxaa looga baahan yahay barnaamijyada waxbarasho qaarkood sida MBA
Manhajka Vitae (CV)
Warqadda deeqda waxbarasho (haddii loo baahdo)
Faahfaahinta xiriirkaaga hadda
Kaarka Aqoonsiga caymiska caafimaadka
Dukumiintiyadan loo baahan yahay waxay ku kala duwan yihiin hay'adaha iyo darajada aad rabto inaad raacdo sidaa darteed waqti u qaado si aad u sameyso cilmi baaris dheeraad ah sida la xiriirista sarkaalkaaga ogolaanshaha dugsiga ama qof mas'uul ka ah sanduuqa deeqda waxbarasho si loo ogaado nooca dukumiintiyada aad u baahan tahay.
Markaad haysato dhammaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah, waad bilaabi kartaa codsiyada deeqda waxbarasho oo waxaad mar walba dalban kartaa in ka badan hal deeq waxbarasho, xaqiiqda, waxaa lagugula talinayaa inaad dalbato inta ugu badan ee suurtogalka ah si aad u kordhiso fursadahaaga.
Isku day inaad bilowdo arjigaaga deeqda waxbarasho goor hore oo tan si aad u sameyso waxaad u baahan doontaa inaad haysato dhammaan dukumiintiyada oo aad toos ula xiriirto maareeyaha deeqaha waxbarasho iyo hay'adda aad doorbideyso.
Aniga oo ah arday Hindi ah oo doonaya inuu wax ku barto dalka dibadiisa, waxaan diyaariyey 25 fursado waxbarasho oo aad kala dooran karto oo ay la socdaan.
Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Hindida ah ee Dibedda wax ku baranaya
Inlaks Shivdasani Deeqaha Aasaasiga ah
Jaamacadda Adelaide Ashok Khurana Deeqda Ardayda Hindida ah
Deeqda Hogaamiyaasha Caalamiga ee Hindiya
UCD Global Graduate Scholarships ee Ardayda Hindida ah ee ku nool Ireland
Deeqda Tulip Orange
Campus France Charpak deeq waxbarasho
Charles Wallace India Trust Deeqaha
British Council GREAT Deeqaha Ardayda Hindida
Oxford iyo Cambridge Society of India (OCSI) Deeqaha Waxbarashada
Jaamacadda Lincoln India Scholarship
Jaamacadda Oxford Felix Deeqda Ardayda Hindida
Deeqaha Caalamiga ah ee UWE
Jaamacadda Southampton Lacagta Deeqaha Caalamiga ah
Jaamacadda Sheffield Scholarships
Sussex Indian deeq waxbarasho
Sir Edmund Hillary Scholarships, Jaamacadda Waikato New Zealand
Deeq waxbarasho oo caalami ah, Jaamacadda Gloucestershire
The Patrick iyo Kelly Lynch Deeqaha
Deeqda Dugsiga Ganacsiga ee Jaamacadda Durham
Deeqda Cilmi-baarista CCS ee Aqoonyahannada Dibadda, Taiwan
Jaamacadda Heidelberg Ph.D. Wadashaqeynta Jarmalka
Jaamacadda GIFU si gaar ah loo maalgeliyo Deeqaha Ardayda Caalamiga ah
Stanford Reliance Dhirubhai Fellowships ee Ardayda Hindida ah
Jaamacadda Cornell Tata Scholarship
Dumarka Asia ee ku jira deeqda waxbarasho ee ganacsiga
Inlaks Shivdasani Deeqaha Aasaasiga ah: Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ugu wanaagsan ee ardayda Hindida ah inay wax ku bartaan dibadda waxaana loo heli karaa inay ka helaan codsiyada kaliya ardayda Hindida ah inay wax ka bartaan hay'adaha ugu sarreeya ee Mareykanka, Yurub iyo Ingiriiska ee loogu talagalay Masters-ka buuxa, M.Phil, ama Doctorate barnaamijka.
Iyada oo maalgelinta ugu badan ee 100,000 USD, deeqaha waxbarasho waxay daboolayaan waxbarid buuxda, caymiska caafimaadka, gunnada safarka ee Hindiya ilaa waddanka daraasadda.
Si aad ugu qalanto deeqdan waxbarasho waa inaad ka hooseysaa da'da 30 sano.
Jaamacadda Adelaide Ashok Khurana Deeqda Ardayda Hindida ah: Tani waa mid ka mid ah deeqaha waxbarasho ee ardayda Hindida ah ee doonaya inay wax ku bartaan dibadda.
Deeqda waxbarasho ayaa loo heli karaa oo keliya barnaamijyada jaamacadeed waxayna u dhigantaa $ 30,000 sanadkii.
Si aad xaq ugu yeelatid deeqda waxbarasho waa inaad noqotaa mid cilmiga leh oo waa inaad lahaataa tayada hoggaaminta.
Deeqda Hogaamiyaasha Caalamiga ee Hindiya: Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa labadaba shahaadada koowaad iyo tan jaamacadeed ee ardayda Hindida ah inay wax ku bartaan Jaamacadda Queensland ee Australia.
Deeqdani waxay xaq u leedahay oo keliya ardayda farshaxanka Hindida ah ee doonaya inay qaataan shahaadada koowaad ama shahaadada koowaad ee Kulliyadda Ganacsiga, Dhaqaalaha, iyo Sharciga UQ.
In kasta oo aysan jirin waxqabad waxbarashadeed oo gaar ah oo loogu talagalay ardayda diyaar u ah inay codsadaan fursaddan, haddana deeqda waxbarasho waxaa asal ahaan lagu bixiyaa heerka tacliinta sare sidaa darteed ardayda waxqabadka sare keliya ayaa mar walba la xushaa
UCD Deeqaha Caalamiga ah ee Ardayda Hindida ah ee ku nool Ireland
UCD Deeqaha Caalamiga ah ee Ardayda Hindida ah ee ku nool Ireland: Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda Hindida ah si ay wax ugu bartaan Jaamacadda College Dublin, Ireland.
UCD waa mid ka mid ah jaamacadaha caalamiga ee ugu caansan dalka Ireland iyadoo qiyaastii 30% ay ardaydeedu yihiin ardayda caalamiga ah.
Deeqda Tulip Orange Deeqdani waxay ku jirtaa qaybo badan waxayna u furan tahay labadaba ardayda shahaadada koowaad iyo tan sare ee Hindida ah inay dibedda wax ku bartaan.
Qeyb kasta oo ka mid ah waxay leedahay shuruudo gaar ah iyo habraacyo dalab maaddaama dhowr qaybood ay maalgeliyaan hay'ado kala duwan.
Campus France Charpak deeq waxbarasho: Deeqdani waxay u furan tahay inay ka hesho codsiyada Hindida iyo ardayda kale ee caalamiga ah.
Waxay u furan tahay kaliya daraasadaha shahaadada mastarka ee dhinacyada ballaaran ee daraasadaha.
Deeqdani waxay u qaybsan tahay laba qaybood, Charpak AME Scholarship oo daboolaya kaalmada nolosha ee 700 euro, fiisada ardayga, iyo Etudes en France oo laga dhaafayo khidmadda khidmadda, ka dhaafida khidmadda waxbarashada illaa 5000 euro, caawimaad si loo helo hoy arday oo la awoodi karo.
Qaybta labaad waa deeqda waxbarasho ee daboolaysa tikidhada hawada ee hal-dhinac ah ee fasalka dhaqaalaha laga bilaabo Hindiya ilaa Faransiiska, fiisaha ardayda, iyo Etudes en France oo laga dhaafo khidmadda, iyo amniga bulshada.
Charles Wallace India Trust Deeqaha: Deeqdan waxbarasho waxaa loo heli karaa ardayda Hindida ah oo keliya daraasadaha takhasuska.
Waxay daboolaysaa hoyga iyo kharashka nolosha ee Boqortooyada Midowday, khidmadaha, iyo tabarucaadda khidmadaha caalamiga ah mana taageerto koorsooyinka ama barnaamijyada labada sano ah maadaama ay soconayaan bilo iyo sannad ugu badnaan.
U guuritaanka Iskuulka London ee Farshaxanka Farshaxanka illaa Berlin, barnaamijkan deeq-lacageedka ayaa hadda hakad ku jira inta laga gaarayo waqtiga uu dugsigu dib ugu noqonayo London.
British Council GREAT Deeqaha Ardayda Hindida: Deeqdan waxaa bixiya Golaha Ingiriiska oo kaashanaya ololaha GREAT Britain ee loogu talagalay ardayda Hindida ah inay wax ku bartaan Boqortooyada Midowday.
Deeqdani waxay ka goysaa maaddooyin kala duwan oo kaliya loogu talagalay barnaamijyada jaamacadeed.
Codsadeyaashu waa inay haystaan ​​baasaboor Hindi ah si ay ugu qalmaan deeqdan waxbarasho.
Oxford iyo Cambridge Society of India (OCSI) Deeqaha Waxbarashada: Deeqda waxbarasho ayaa loo heli karaa labadaba bachelor-ka iyo shahaadada jaamacadeed waxayna ka goosanaysaa maaddooyin kala duwan.
Waxaa loo heli karaa ardayda Hindida ah inay wax ku bartaan midkoodna Jaamacadda Cambridge ama Jaamacadda Oxford.
Jaamacadda Lincoln India Scholarship: Deeqdani waxay xaq u leedahay maahan oo keliya ardayda Hindida ah laakiin dhammaan ardayda, labadaba kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudaha.
Deeqda ayaa sidoo kale loo heli karaa dhammaan barnaamijyada iyo u-qalmitaanka qaybaha deeqda waxbarasho waxay kuxirantahay asalka tacliimeed, dakhliga reerka, barnaamijka loogu talagalay daraasadda, iyo / ama dhalashada.
Jaamacadda Oxford Felix Deeqda Ardayda Hindida: Deeqdani waxay u furan tahay ardayda Hindida ah inay wax ku bartaan Jaamacadda Oxford, Jaamacadda Akhriska, iyo Jaamacadda London.
Kaliya ardayda loogu talagalay daraasadaha jaamacadeed ayaa xaq u leh inay codsadaan deeqdan waxbarasho.
Deeqaha Caalamiga ah ee UWE: Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda Hindida iyo kuwa caalamiga ah.
Waxay u furan tahay barnaamijyada qalin-jabinta iyo shahaadada koowaadba.
Jaamacadda Southampton LLM Deeqaha Caalamiga ah: Tani waxay ku lug leedahay deeqo iyo amaah labadaba daraasadaha jaamacadeed.
Amaahda jaamacadeed ayaa kaliya loo heli karaa ardayda Boqortooyada Midowday iyo Midowga Yurub ee baranaya barnaamijyada sayidyada ee la baray iyo cilmi-baarista
Jaamacadda Sheffield Scholarships: Jaamacadu waxay siisaa deeqo waxbarasho oo kala duwan ardayda Hindida iyo kuwa caalamiga ah ee shahaadada koowaad iyo tan jaamacadeed.
Sussex Indian deeq waxbarasho: Kani waa mid kamid ah deeqaha waxbarasho ee ugu caansan ardayda Hindida ah ee wax ku barta dibadda.
Waxaa loogu talagalay ardayda cusub ee jaamacadeed ee haysta dhalashada Hindida loona aqbalay inay ku bartaan koorsada Master-ka ee u qalma Sussex. Deeqda ayaa la siiyaa khidmadaha waxbarashada.
Stanford Reliance Dhirubhai Fellowships ee Ardayda Hindida ah: Deeqdan waxbarasho ayaa loo heli karaa Barnaamijka Stanford MBA ee loogu talagalay ardayda Hindida ah ee ay tahay inay ku noolaadaan ama ka shaqeeyaan Hindiya labadii sano ee la soo dhaafay ka hor intaan la codsan.
Waxay ku saabsan tahay 80% khidmadaha waxbarashada iyo kharashyada kuwa abaalmarinta la siiyo.
Adiga oo ah arday Hindi ah oo raadinaya deeqo waxbarasho oo aad wax ku barato dibadda, waxaad ku dhex mari kartaa fursadahaas waxbarasho ee kor ku xusan si aad u ogaato taas oo kugu habboon adiga. Waxaad ku bilaabi kartaa codsiyada dhammaan deeqaha waxbarasho khadka tooska ah.
Kadib marka lagaa aqbalo deeqda waxbarasho deeqda waxbarasho si aad usii wadatid waxqabadkaaga tacliimeed sare, u qaado waxbarashadaada si dhab ah maadaama waxqabadka akadeemiyadeed ee hooseeya ay kaa qaadi karto deeqda waxbarasho.
Liiska Jaamacadaha Fake ee USA, UK, India, Nigeria, iyo Rajasthan
13 Deeqda waxbarasho ee ugufiican Dowlada Canada
Deeqaha Hindiya Barashada Hagaha Dibadda
Deeqaha HindiyaDeeqda Ardayda Hindida ee DibaddaDeeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda Hindida ah ee Dibedda wax ku baranaya
Previous Post:Top 10 Jaamacadaha ugu Raqiisan Australia oo leh Kharashyadooda Waxbarashada
Post Next:Jaamacadda Tacliinta Sare ee Jaamacadda Toronto | Faahfaahin buuxda iyo Codsi